Habeenkii ay Chelsea sida Xun uga OOHISAY Lionel Messi….(Sidee wax u dheceen!!???) – Gool FM
Habeenkii ay Chelsea sida Xun uga OOHISAY Lionel Messi….(Sidee wax u dheceen!!???)
(Spain) 13 Maarso 2018. Barcelona ayaa habeen dambe beydkeeda Camp Nou ku marti qaadeysa Chelsea lugta labaad ee wareega 16-ka Champions League, balse hoosta ka xariiqo waa garoonkii ay Blues uga ooysiisay laacibka shanta jeer ku guuleystay Ballon d’Or ee Lionel Messi.
Sanadkii 2012, kooxda reer London ayaa 1-0 uga soo adkaatay Barcelona lugta hore ee Semi Final ka Champion League ee lagu soo ciyaaray Stamford Bridge.
Laakiin kooxda reer Spain ayaa kalsooni badan ku qabtay inay ka soo kaban doonto natiijadaasi si ay ugu guuleysato Champions League markii saddexaad inta uu xilka u hayay Pep Guardiola.
Waxkastaa si fiican ayay ku bilowdeen, Barca ayaana sidey doonto u xukumeysay kulanka waxaana hogaanka u dhiibay Sergio Busquets, wax yar kaddibna waxaa kaarka cas Blues ka qaatay kabtankeeda John Terry kaddib markii uu suxul ku dhuftay Alexis Sanchez, intaa kaddibna waxaa goolka labaad u dhaliyay Andres Iniesta.
Halkaa marka ay sheekadu joogto qof kasta wuxuu aaminsanaa in ciyaartan ay leedahay hal guuleyste ayna tahay Barcelona. Laakiin markii la maray qeybta labaad Ramires ayaa ka naxsaday taageerayaasha kaddib markii uu gool qurxoon ka dul qaaday goolhayaha, waxaana sidaa ku soo bixi karay Chelsea maadaama ay gool ku dhalisay Spain.
Laakiin sidaas ay tahay Barcelona ayaa weli u muuqatay inay gacanta sare leedahay maadaama ay si xoogan kulanka u xukumeysay isla markaana Rigoore loo dhigay markii uu Drogba qalad ku galay Cesc Fabregas oo hadda ka tirsan Chelsea.
Lionel Messi ayaa qabsaday gool ku laadka balse ma dhalin oo wuxuu ku dhuftay birta, waqti kale oo fiican oo soo maray Barca waa awoodi waysay inay gool kale dhaliso, hayeeshee waxaa sheekada daqiiqadii u dambeysay soo xiray Fernando Torres oo goolhayaha ka tagay kaddib markii uu helay kubbad rogaal celis ah.
Habeenkaas waa habeenkii uu OOYAY Lionel Messi.
“Waxaa la arkaa inaad ooyso inta lagu guda jiro kulan marka aad guul darreysato Final. Dhammaan waa wax qeyb ka ah kubbada cagta. Qolka dhar badalashada Barcelona kaddib kulankii Chelsea, waxaan arkay Messi oo OOYNAYA,” Alexis Sanchez ayaa sidaa daaha ka rogay.
Isku soo wada duuboo, Messi ayaa soo afjaray sheekadii ahayd inuusan marna gool ka dhalin Chelsea waxaase la is waydiinayaa habeen dambe miyuu ka aarsan doonaa Chelsea ilintii ay dhulka uga qubtay mise???
GOOGOOSKA: AS Roma vs Shakhtar Donetsk 1-0 (2-2) (Roma oo usoo gudubtey rubuc-dhamaadka CL)